पशुपतिको जग्गानै गायब ! « Onlinetvnepal.com
पशुपतिको जग्गानै गायब !
Published : 14 May, 2019 3:09 pm
शुपतिनाथले सबैको रक्षा गर्छन् । तर, नेपालका भूमाफिया यति शक्तिशाली छन्, जसबाट पशुपतिनाथले आफ्नै जायजेथा रक्षा गर्न सकिरहेका छैनन् । यो खबर गोपीकृष्ण ढुंगाना/सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । पशुपतिका नाममा रहेको उपत्यकाकै कम्तीमा दुई सय ३१ रोपनी १० आना जग्गा कहिले कसले खायो पत्तै छैन । वागमतीदेखि मनहरा नदी बगरसम्मका पशुपतिको जग्गा हराएका हुन् । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरदेखि भूमाफियासम्मले पशुपतिको जग्गा गायब पारेको ठहर छानबिन समितिले गरेको छ ।